Maraykanka oo Qudus u Aqoonsanaya Caasimada Israel iyo digniinta Beesha Caalamka • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Maraykanka oo Qudus u Aqoonsanaya Caasimada Israel iyo digniinta Beesha Caalamka
Maraykanka oo Qudus u Aqoonsanaya Caasimada Israel iyo digniinta Beesha Caalamka
December 6, 2017 - By: Khalid Yusuf
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa lagu wadaa in maanta oo Arbaca ah ku dhawaaqo in dowladiisa ay magaalada barakeysan ee Qudus u aqoonsan doonaan caasimada Israel, isla markaana Safaarada Maraykanka oo hada ku taal Tel Aviv loo rari doono Qudus.
Go’aankan ayaa ah mid si weyn loo hadal hayey inuu ku dhawaaqi doono Trump, balse waxaa si weyn uga digay arrintan Madaxda dalalka Carabta, Islaamka iyo waliba guud ahaan Beesha Caalamka oo tilaabadan ku sheegay inay noqon doonto mid khatar ku ah amniga caalamka iyo waliba in wax heshiis ah mustaqbalka laga gaaro bariga dhexe.
Trump ayaa shalay khadka telefoonka kula xariiray shan hogaamiye ee dalalka Bariga dhexe iyo Carabta ah si uu ulla socodsiiyo go’aanka uu maanta ku dhawaaqayo. Waxaa kamid ah hogaamiyayaasha uu wacay Madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas.
Madaxweyne Cabaas ayaa ka digay inuu tilaabadan ku dhaqaaqo Trump, wuxuuna sheegay in go’aankan uu dhabarjab ku noqon doono wax heshiis ah oo la dhex dhigo Falastiiniyiinta iyo Israel. Maamulka Falastiin ayaa u diyaar garoobaya banaanbaxyo ka dhan ah Maraykanka.
Boqorka Sacuudiga Salmaan ayaa isaguna war uu soo saaray sheegay in go’aankan ay keeni doonto caro ka timaada Dunnida Islaamka iyo Carabta ayna khatar ku noqon doonto xasiloonida gobalka.
Madaxweynaha Trukiga Erdogan ayaa isagu sheegay hadii Maraykanka u aqoonsado Qudus Caasimada Israel, in dowlada Turkiga ay xiriirka u jari doonto maamulka Israel.
Urdun / Jordan
Boqorka Urdun Cabdullahi ayaa sheegay in magaalada Qudus ay tahay halka ay Dowlada Falastiin dooneyso inay noqoto caasimadooda, waxayna udub dhexaad u tahay waan waanta nabada ee laga dhex waday Falastiin iyo Israel. Boqortooyada Urdun ayaa ah mida ka mas’uulka ah Masjidka Barakeysan ee Al Aqsa ee ku yaal magaalada Qudus.
EU, France & Germany
Qaar kamid ah dalalka Midowga Yurub ayaa arrintan uga digay Maraykanka, waxaana kamid ah Madaxweynaha Faransiiska Macron oo sheegay in go’aankan uu yahay mid khaldan.
Wasiirka Arrimaha Dibada ee Germany Sigmar Gabriel ayaa sheegay in go’aankan uu dab kusii shidi doono xiisada ka taagan Bariga Dhexe oo aysan wax xal ah keeni doonin.
Xoghayaha Qaramada Midoobay Antonio Guterres ayaa isaguna sheegay in go’aankan uu caqabad ku noqon doono qorshihii la doonayey in labo dal oo deris ah noqdaan Falastiin iyo Israel.
Dhamaan dalalka Caalamka ayaa u aqoonsan magaalada Qudus mid aan weli lagu heshiin oo ay Israel xoog ku qabsatay, isla markaana dhamaan Safaarada dowladaha xiriirka laleh Israel ayaa hada ku yaal magaalada Tel Aviv.
Balanqaadkii Trump & Kushner
Donald Trump ayaa isagu xiligii uu ku jiray ololaha Doorashada balanqaaday in Qudus caasimada Israel uu aqoonsan doono, isagoo taasi ku qancinayey Kirishtaanka Xagjirka ah ee iyagu sida indho la’aanta ah u taageera Israel iyo waliba Ganacsatadii & Maalqabeenada Yuhuuda Maraykanka ee dhaqaalaha siiyey xiligii ololihiisii Doorashada.
Donald Trump ayaa Wakiilkiisa u qaabilsan arrimaha Bariga Dhexe u magacaabay wiilka uu sodoga uu u yahay ee Jared Kushner oo isagu ah ganacsade Yuhuud ah oo kamid ah, Yuhuuda Maraykanka ee sida weyn ugu ololeyn jiray Israel.
Jared Kushner oo xiriir dhaw laleh Raysalwasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa kamid ah xubnaha sida weyn ugu ololeenaya in Trump go’aankan ku dhawaaqo. Kushner ayaa dhowr todobaad kahor safaro ku tagay magaalada Qudus oo kulamo kula lahaa maamulka Israel.
Wuxuu go’aankan kusoo beegamayaa wakhti fadeexooyin kala duwan ay soo wajahayaan Madaxweynaha Maraykanka Trump iyo waliba Raysalwasaaraha Israel Benjamin Netanyahu oo isaguna lagu heysto musuq maasuq gudaha dalkiisa, waxaana la rumeysan yahay in tilaabadan ay labadaasi hogaamiye ay doonayaan inay sumcad uga raadsadaan taageerayaashooda xagjirka ah.
Trump go’aankiisa ayaa lagu soo beegay xili ay xiisadi ka dhex taagan tahay dalalka Khaliijka iyo Carabta oo hada dhexdooda isku mashquulsan.